हट न्युज , मध्यपहाडि लोकमार्गमा सवारी दुर्घटना हुँदा ३ जना घाइते, एक जनाको अवस्था गम्भिर ।।
मध्यपहाडि लोक मार्ग अन्तर्गत बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका २, काँडेरुख नजिकै पिकअप र मोटरसाईकल एकआपसमा ठोक्किदाँ ३ जना घाइते भएका छन् ।
घाइते मध्य एक जनाको अवस्था गम्भिर रहेको घाइते संगै रहेका प्रहरी हवल्दार मदन तिमिल्सीनाले जानकारी दिएका छन्। घाइतेको गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. ७ मा रहेको मल्ल मेडिको फर्मामा प्राथमिक उपचार भैरहेको र थप उपचारको लागी हेलिकप्टर मगाइएको र आउँदै गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
खर्वाङ बाट ग्वालीचौर तर्फ जाँदै गरेको ना ४ च ३६६७ नम्वरको पिकअप जिप र विपरित दिसावाट आउँदै गरेका ध १ प ३२४६ र बा ५५ प ८०५० नम्वरका मोटरसाईकल आपसमा ठोकिँदा सो दुर्घटना भएको हो। घाइते ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. १ का वर्ष ३६ का खगेन्द्र विसिको अवस्था गम्भिर भएको अस्पतालले जनाएको छ। त्यस्तै सोहि स्थानका वर्ष २७ का सुरेन्द्र वोहोरा, २६ वर्षका भरत विसि घाइते भएका छन्।
पिकअप जिप चालक, र क्षेति ग्रस्त गाडि खर्वाङ प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको प्रहरी नायव निरिक्षक लाल वहादुर चौधरीले जानकारी दिए। वुर्तिवाङ वाट वुटवलका लागि हिँडेका मोटरसाईकल सवार यात्रुवाहक वसलाई ओभरटेक गर्ने क्रममा विपरित दिसा तर्फवाट गैरहेको पिकअप संग ठोकिएको स्थानियले वताएका छन्। घटनाको अनुसन्धान भैरहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटना विहान साढे ९ वजे तिर भएको थियो।